मन्त्रिहरुको मनपरि: शिक्षामन्त्री मास्क नलगाइ उद्घाटनमा, कृषिमन्त्री बिहेमा ! – Dailny NpNews
मन्त्रिहरुको मनपरि: शिक्षामन्त्री मास्क नलगाइ उद्घाटनमा, कृषिमन्त्री बिहेमा !
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख १८, २०७८ समय: १८:३६:३८
कोरोना भाइरस डरलाग्दो गरी फैलिएकाले थेग्न नसक्ने भन्दै एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हात उठाएको छ । अर्कातिर, मन्त्रीहरू नै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परिसरमा बनेको नवनिर्मित भवन उद्घाटनका लागि हिजो भक्तपुर पुगेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेनन् । बेसार पानी खाने र हाछ्युँ साछ्युँ गरेर कोरोना उडाइदिने भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त कार्यक्रममा भर्चुअल सहभागिता जनाएका थिए ।
तर, फिल्डमै पुगेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने बिनामास्क, बिनासामाजिक दूरी फोटो सेसन गरे । महामारीले पूरै देशलाई आक्रान्त पारेका बेला एकअर्कासँग टाँसिएर, बिनामास्क फोटो खिचाउनेमा विदेशी नागरिकसहित शिक्षासचिव रामप्रसाद थपलिया, मन्त्रालयका केही कर्मचारी पनि छन् ।
कार्यक्रम सकिएपछि मञ्चमा ११ जनाले तस्वीरका लागि ‘पोज’ दिएकाे देखिन्छ । तीमध्ये दुई जना महिला कर्मचारीले मास्क लगाएका छन् । अरु दुई जनाको मास्क चिउँडोमुनि छ । कोरियन नागरिकसहित शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ, सचिव थपलियालगायत ७ जनाले मास्क लगाएका छैनन् । सबै एकअर्कामा टाँसिएर उभिएका छन् ।
बिस्मातको कुरा त के भने, यही ३ वैशाखमा शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेका मापदण्डहरू पालना गर्न अपिल गरेको थियो ।तर, सूचना जारी गरेको १५ दिन नबित्दै शिक्षामन्त्रीले त्यसैको उल्लंघन गरेका हुन् ।कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकासहित २२ जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ ।
सरकारलाई सघाउँदै अक्सर नागरिक घरभित्रै बसेका छन् । तर, मन्त्री नै यसरी जनस्वास्थ्य मापदण्डको खिल्ली उडाएर कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको भन्दै कतिपयले फेसबुक, ट्विटरमा आक्रोश पोखेका छन् । ‘एकातिर तपाईंहरू संक्रमण थेग्नै नसक्ने भएकाले कडाइका साथ स्वास्थ्य नियमहरू पालना गर्न नागरिकलाई भन्नुहुन्छ, अर्कातिर शिक्षामन्त्री नै बिनामास्क, बिनासामाजिक दूरी फिल्डमा देखिँदै हुनुहुन्छ । मन्त्रीहरूले चाहिँ मापदण्ड पालना नगर्नु पर्ने हो ?’
जवाफमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले शिक्षामन्त्रीबाटै जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन हुनु दुःखद् भएको बताए । ‘के मन्त्री, के नागरिक जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सबैका लागि समान हो’, गौतमले भने, ‘कोरोनाविरुद्धको यो युद्ध जित्न सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’
मन्त्रीज्यू किन यसाे गर्नु’भाे ?-भवन निर्माणमा सहयोग गरेको विदेशी संस्थाका प्रतिनिधिले मास्क खोलेर एउटा फोटो खिच्न अनुरोध गरेको र केवल केही सेकेन्डका लागि मास्क खोलेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठकाे जिकिर छ ।कोरोना भाइरस डरलाग्दो गरी फैलिएकाले थेग्न नसक्ने भन्दै एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हात उठाएको छ ।
अर्कातिर, मन्त्रीहरू नै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको उल्लंघन गरिरहेका छन् । प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परिसरमा बनेको नवनिर्मित भवन उद्घाटनका लागि हिजो भक्तपुर पुगेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेनन् । बेसार पानी खाने र हाछ्युँ साछ्युँ गरेर कोरोना उडाइदिने भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त कार्यक्रममा भर्चुअल सहभागिता जनाएका थिए ।
बिस्मातको कुरा त के भने, यही ३ वैशाखमा शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेका मापदण्डहरू पालना गर्न अपिल गरेको थियो ।तर, सूचना जारी गरेको १५ दिन नबित्दै शिक्षामन्त्रीले त्यसैको उल्लंघन गरेका हुन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकासहित २२ जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ ।
मन्त्रीज्यू किन यसाे गर्नु’भाे ?-भवन निर्माणमा सहयोग गरेको विदेशी संस्थाका प्रतिनिधिले मास्क खोलेर एउटा फोटो खिच्न अनुरोध गरेको र केवल केही सेकेन्डका लागि मास्क खोलेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठकाे जिकिर छ । ‘तपाईंले मास्क खोल्न अस्वीकार पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि !’, जवाफ मन्त्री श्रेष्ठले यसरी दिए, ‘अस्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ, तर गरिएन । अहिले पो महसुस गर्दै छु ।’
अनि सामाजिक दूरी ?-मन्त्री श्रेष्ठले हिजोको कार्यक्रममा आफूबाट गल्ती भएको स्वीकारे । ‘मैले सोच्नुपर्ने कुरा थियो । सरकारकै आग्रह मानेर नागरिक घरमा थुनिएर बसेका छन् । हामीले नै स्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ता गरियो भने त्यसको सन्देश निकै खराब जान्छ’, उनले भने ।
उनले अबदेखि यस्तो कमजोरीबाट जोगिने पनि बताए । ‘हामीले स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गरेर त्यो कार्यक्रम आयोजनाको चाँजोपाँजो मिलाएका थियौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारबाटै नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिदिनुभयो । तर, अन्तिममा सानो असावधानीले आलोचना खेप्नुपर्‍यो । अबदेखि त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन ध्यान दिने छु ।’ फेसबुक,ट्विटरमा भइरहेको आलोचनालाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
पद्माकाे पारा -फेसबुक र ट्विटरमै एउटा तस्वीरलाई लिएर कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालकाे पनि खुबै आलाेचना भइरहेकाे छ । अनेरास्ववियू केन्द्रीय कमिटी सचिवालय सदस्य अस्मिता थापाले आफ्नी साथी प्रिति थापाकाे विवाहमा भन्दै ट्वीट गरेकाे तस्वीरमा मन्त्री अर्यालले मास्क लगाएकी छैनन् ।
उनीपछाडि जम्मा एक महिलाले मात्र मास्क लगाएको देख्न सकिन्छ । सामाजिक दूरी पनि कायम गरिएकाे छैन । यसबारे बुझ्न निकै पटक सम्पर्क प्रयास गर्दा मन्त्री अर्यालको फोन उठेन । अस्मिताकाे ट्विटर ह्याण्डलबाट याे तस्वीर हिजाे साढे २ बजे शेयर भएकाे देखिन्छ ।
नयाँ भेरियन्टसहित कोरोना भाइरस सुनामी बनेर फैलिएको छ । रोकथामका लागि घरभित्र बसेर नागरिकहरू सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरिरहेका छन् । तर, मन्त्रीहरू भने बिनामास्क, बिनासामाजिक दूरी भीडभाड र समारोहमा जान छोडेका छैनन् ।
युराेपतिर यसरी उच्चपदस्थ व्यक्तिले सामाजिक नियमहरूकाे उल्लंघन गर्दा राजीनामा दिनुपरेका घटना छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डविपरीत गतवर्ष फेब्रुअरीको अन्तिम साता आफ्नै जन्मदिनको पार्टीमा सहभागी भएपछि नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोल्वेगले २० हजार क्रोनर जरिवाना तिरेकी थिइन् ।
गतवर्ष अप्रिलमा लकडाउन उल्लंघन गर्दै परिवारसहित समुद्री किनारमा घुम्न गएपछि न्युजिल्यान्डका स्वास्थ्यमन्त्री डेभिड क्लार्कले राजीनामा दिनुपरेकाे थियाे ।नेपालमा भने सामाजिक नियमहरूकाे उल्लंघन गर्दा नागरिकस्तरबाट हुने आलोचनामा मन्त्री वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले क्षमा मागेर नैतिकता देखाएकाे उदाहरण भेट्न मुस्किल छ । शिलापत्र